Apple inoita kuti ceramic edition Apple Watch ishaikwe | Ndinobva mac
Apple inoita kuti ceramic edition Apple Watch inyangarike
Nehurukuro yaApple nezuro nyowani Apple Watch nhevedzano 6, isu tinosara tichifunga nezveruvara rupi runenge rwakanakisa pachiuno chedu. Bhuruu, grey, goridhe, simbi, tsvuku ... uye kana kuyerwa kweropa oxygen kuchinge kwakaringana seyero yemoyo. Nekudaro, vashoma vedu vanofunga nezveruzivo. Iripi iro zvedongo edition Apple Watch?. Apple yakafunga kuti inguva yekubvisa iyo kubva mukabhuku, zvakare
Zvinotaridza kuti iyo ceramic modhi haina kunyatso kubata pakati pevashandisi. Yakavhurwa kekutanga, mune edition nhamba 3 yeApple Watch. Elegant uye kugadzirwa muzvinhu zvekutanga, Sezvo zvedongo iri (mune wachi, inenge iri yakanakisa inogona kushandiswa), zvinoita sekunge zvakakwana uye Yakabviswa mukatalog pakaburitswa Series 4.
Nekuvhurwa kweakateedzana 5, iyo Apple Watch mairi iyo iyo retina skrini yaigara iripo, yakavhurwa zvakare uye nemitengo yakajairika yezvinhu zvayo zveprimiyamu. Asi haifanire kunge yakabata vanhu futi, nekuti zvakare, Apple uye kuvhurwa kweakateedzana 6, akabvisa zvakare iyi yakasarudzika edition kubva mukatalog.
Iyo yaisanganisira, mitsva yakasarudzika edhisheni, asi hapana kana chiratidzo checeramics chero kupi. Inoda kuziva, sezvazviriwo kuziva kuti inoenderana nekuburitswa kwevaviri, kubviswa kweiyi yakakosha edition. Tichava neichi chinyorwa zvakare nekuvhurwa kwechikamu 7?
Sevha iyi ceramic modhi segoridhe pamucheka, kwete chete kune kukosha kwayo kwehupfumi, asi nekuti kana pakupedzisira Apple ikasaidzosa pamusika, icharamba iri sechinhu chemuteresi uye zvechokwadi kuti pamusoro pemakore, kukosha kwayo kuchawedzerwa uye chichava chidimbu chakakodzera mamwe mamuseum akazvimirira kukudza Apple ayo ari pasirese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inoita kuti ceramic edition Apple Watch inyangarike
Pano unogona kuona zvakare chirevo chikuru cheiyo nyowani Apple Watch, iPad Mhepo, Apple One uye Fitness +
mawatchOS 7 anowanikwa munaGunyana 16 kubva pane akateedzana 3